Home » Hawaii Travel News » Fitsangatsanganana hatao any Hawaii: The Diamond Head Theatre dia manolotra zazavavy tetiandro
Izaho dia Lord of Hartforth, tanàna taloha iray izay eo akaikin'ny Valan-javaboary Yorkshire Dales any avaratr'i Angletera. Tsy betsaka ny mandeha any. Tena mpandala ny nentin-drazana izy io, izay ireharehan'ny olona ny fitondran-tenany mety. Roa ambiroapolo kilaometatra atsimo no misy an'i Rylstone, tanàna iray mitovy lalana ihany koa. Ny Rylstone Women Institute dia nalaza tamin'ny alàlan'ny tetiandron'ny fiarahamonina 1999 satria nalaina sary miboridana ireo vehivavy manaja azy. Angela Baker, izay vadin'i John, tompon'andraikitra mpanampy eo amin'ny valan-javaboary, dia maty noho ny lymphoma tsy Hodgkins tamin'ny Jolay 1998 teo amin'ny faha-54 taonany, nanentana ny hevitra ho an'ny kalandrie. Betsaka ny olona nirohondrohona tao Rylstone; ity dia tsy tsotra protokol anglisy. Rehefa tratra tsy nahomby tamin'ny volana Aogositra 1992 i Sarah Ferguson, Duchess of York, dia noroahina avy tao amin'ny Balmoral Castle izy ary nolavin'ny fianakavian'ny mpanjaka nandritra ny 16 taona. Toy izany koa, ireo vehivavy 11 nasongadina tamin'ny kalandrie nudie dia azo antoka fa nampiakatra ny volomaso, na dia teo amin'ireo olona malala-tanana aza; na izany aza, nanangona vola mitentina 2 tapitrisa tapitrisa £ ho an'ny fikarohana leukemia ireo vehivavy ireo, ary ny fampielezan-kevitr'izy ireo dia niteraka sarimihetsika malaza nataon'i Helen Mirren. Ilay sarimihetsika dia niteraka tantara an-tsehatra, Girls Girls.
Eo an-tsehatra ao amin'ny Diamond Head Theatre ankehitriny ny Girls Girls, miorina amin'ny tantaran'i Angela sy John Baker. Mahagaga. Maty noho ny homamiadana ny renibeko roa; manimba ny fianakaviana izany. Voalohany dia misy ny vaovao manaitra izay mitarika amin'ny tomany am-bolana, avy eo mangataka amin'Andriamanitra mba hanasitrana ny aretina, avy eo taratra ny taratra sy ny chemo am-bolana izay andoavanao tsy tapaka ary tsapanao fa natsipy tao anaty lafaoro microwave ianao. Ny Girls Girls dia mitondra anay mamakivaky ireo traikefa mahatsiravina, mijery ny olon-tianao maty eo alohanao.
Ao amin'ny lalao, taorian'ny fahafatesan'ny leukemia an'i John, vadin'i Annie, dia nanapa-kevitra ny hanangona vola ho an'ny hopitaly iray izy sy ny sakaizany Chris. Vitany ny mandresy lahatra ny namany efatra hametraka miboridana miaraka amin'izy ireo amin'ny kalandrie "alternativa". Niparitaka toy ny afo mando ny vaovao momba ny asa soa ho an'ny vehivavy, ary vetivety dia nidina ny tanàna keliny tao amin'ny Yorkshire Dales ny vondron-gazety. Fahombiazana ny kalandrie, fa ny fisakaizanan'i Chris sy Annie dia nosedraina tamin'ny fihenan'ny lazany vaovao.
Notarihin'i Ahnya Chang ary nosoratan'i Tim Firth. Anisan'izany i Betty Bolton, Colleen Parlee, Dawn Powell, Liz Stone, Holly Holowach, Susan Hawes, Zoe Sher, Regina Ewing, Ann Brandman, Lisa Konove, Shane Noel, Mo Radke, Jesie Rocetes ary Brian Bond.
Ny talen'ny Ahnya Chang dia nilaza hoe: "Rehefa mieritreritra ny handray an'ity famokarana ity, miaraka amin'ny lohahevitra momba ny finamanana, ny fitiavana, ny fahaverezana, ny fanantenana, ny fanavaozana ary ny fandinihana, miaraka amin'ny fikirakirana ny fananahana, ny vanim-potoana ary ny fanamafisana, dia mora ny nahita singa mahaliana sy azo ifandraisana . Seho mampihomehy, mamy ary mampihetsi-po ity, ary rehefa naseho mazava ny lazan'ny sarimihetsika 2003, dia tsy ho sarotra amin'ny mpihaino ny mihorakoraka amina tarehin-tsoratra ireo rehefa manomboka ny tetikasan'izy ireo. Raha ny famongorana ny homamiadana sy ny fanalefahana ny fanaintainana ho an'ireo mila fanampiana, dia eo an-tsambo daholo isika, ary fanantenana manintona izany rehefa manomboka ny fizotranao tantara ianao. ”
Hitako fa mihetsiketsika ny seho. Tena nidona an-trano izany; tantara mandresy lahatra ity. Eny, tena misy ny fitanjahana eo amin'ny sehatra - fa handeha miboridana any amin'ny Kalakaua Avenue aho raha toa ka mahasitrana homamiadana. Indraindray, tsy maintsy mamantatra izay tena zava-dehibe amin'ny fiainana isika. Amiko dia tena zava-dehibe ny nataon'ireto vehivavy ireto. Manoro hevitra anao aho hahita ity lalao ity.
Ny ampahany amin'ny seho dia mety hahakivy ho an'ny olona malahelo noho ny famoizana havan-tiana iray. Susan Hawes dia kintana satria Celia, socialite (amin'ny masony manokana) izay milalao golf ary azo ianteherana misotro toaka na roa miparitaka any amin'ny toerana iray momba ny momba azy. Na dia mamo aza, ary angamba tsy dia ambony noho ny fiheveran'i Celia ny tenany, ny zavatra lazainy dia mampiakatra azy amin'ny toerana ambony:
“Misy olona tezitra. Mandany ny antsasaky ny fiainako amin'ireo olona mila sorena aho. Niditra amina klioba golf aho - araka ny hevitrao fa nikasa ny hanao izany aho? Voasarika ho any Yorkshire aho tamin'ity 'Ohh hiverina' ity, ry fitiavana, avelao aho hitondra anao hiverina honina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. ' Manaiky aho. Mihetsika isika… .. tampoka dia tonga tamin'ity aretina antsoina hoe 'Golf' ity izy. Ary terminal izany. Tampoka raha te hahita azy aho dia midika hoe mandany ny antsasaky ny fiainako miaraka amina andiana vehivavy izay - azafady 'andriambavilanitra' - izay manamboatra lalàna mba hahazoana antoka fa tsy misy olona sosotra! Fitsipika momba ny fametrahana maitso… sy ny efitrano fisoloana akanjo! Ary ny bara! Ary - NY SAKAN'ANDRIAMANITRA - 'Fehezan-dresaka ho an'ny sakafo hariva an'ny kapiteny' ka tsy hiala amin'ny resaka golf isika raha ny hany azonao lazaina momba ny golf dia hoe: 'Tsy nokapohiko ilay izy ka tsy azoko ilay lavaka fa raha izaho raha nokapohiny mahitsy dia efa niditra tao anaty lavaka izy '. Ary mazava ho azy fa mbola voambara daholo ny zavatra tena tadiavin'izy ireo. Ao ambadiky ny lamosin'ny olona fotsiny. Matetika ny ahy. 'Ny eo alohan'i Celia dia tsy mihemotra na oviana na oviana amin'ny fandrosoana.' Ary marina DAMN fa tsy izany. Izay mihitsy no tokony ho izy. Ny tratrako dia tsy zavatra tokony hafenina noho ny fiarahamonina mihosin-dra - mampalahelo - na inona na inona antony fa lazaiko anao ihany, misaotra ireo vehivavy toy ny zazavavy club club feno rà ry zareo. Ary raha mbola tsy naratra loatra ny reniko mba hampisehoana ny tratrany tamin'ny tratra rehefa tonga ny fotoana dia mbola hanana ny sisa aminy isika. Izay no antony tiako hambara amin'ny mafia Hermes an'ny Ladies 'Bar dia,' Midina any amin'ny WI, ry zazavavy. Andao hiara-hipetraka amin'ireo vehivavy tena ao amin'ity faritany ity ary mianara fametavetana kely alohan'ny tara loatra amin'ny ra. ' Mahafaly. "
Ny fandaharana dia Alakamisy - Alahady. Seho hariva manomboka amin'ny 7 ora sy sasany Alakamisy - Sabotsy. Amin'ny 30:4 hariva ny seho Alahady ary amin'ny 00:3 hariva ny matinees.
Rota: Liz Stone
Mpikambana WI: Ann Brandman, Monique Frazier, Frances Hisashima, Jill Wakabayashi